Real Madrid oo ku guulaysatay Koobka kooxaha - Cakaara News
Spain(CS) Real Madrid ayaa ku guulaysatay koobkii afraad ee sanadkan 2014-ka, kaddib markii ay ka badisay kooxda San Lorenzo ee waddanka Argentina oo matalaysay Laatiin Ameerika, kama dambeysta koobka Adduunka ee Kooxaha, ee lagu qabtay waddanka Morocco. Kooxda ayaa horay sanadkan ugu guulaysatay Koobka Horyaalada Yurub, Koobka Copa del Rey iyo koobka Super Cup-ka ee lagu daah furo ciyaaraha Horyaalada Yurub.
Sergio Ramos ayaa goolka koobaad madaxa ugu dhaliyay kooxdiisa. Goolka kalana waxa uu ku yimid khalad uu galay golhayaha kooxda San Lorenzo, khaladkaasi oo uu ka faa’iidaystay Gareth Bale, goolna uu u badelay. Real Madrid ayaanan la hakin muddo dheer waxa ayna sii dheeraysay rikoorkii ay u dhigtay Spain iyadoo haatan badisay 22 kulan oo isku xiga oo ah guud ahaan ciyaarihii ay dheeshay.